Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 36)
Xiaomi Mi5, sawirro cusub iyo dhibcaha AnTuTu
Telefoonka cusub ee Xiaomi, oo loo malaynayo inuu yahay Mi5, ayaa lagu soo bandhigi doonaa laba maalmood gudahood. Waxaan haynaa dhibcaha AnTuTu iyo sawirro cusub
[RUMOR] Samsung Galaxy Note 5 waxay lahaan lahayd labalaab qafiif ah
Xanta cusub ayaa noo imaaneysa taas oo tilmaameysa nooca Samsung Galaxy Note 5 oo leh shaashad shaashad leh oo laba laaban.
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa Android 5.0.1 Lollipop iyo Sense 6.0 oo ku yaal HTC One M8
HTC One M8 ayaa heli doonta Android 5.0 Lollipop dabayaaqada bishaan iyada oo lagu daro lakabka caanka ah ee Sense 6.
Layaab !!, Qiimaha LG G Flex 2 waa la sifeeyey
Amazon ayaa ku shaandheysa boggeeda Jarmalka qiimaha LG G Flex 2 oo leh qiimo iib ah oo layaab leh 599 Euros.
Xaqiijiyay !!, Sony waxay bilaabi doontaa inay soo rogto cusbooneysiinta Lollipop ee taxanaha Xperia Z bisha Febraayo ee soo socota
Waxaa si rasmi ah u xaqiijiyay Sony in cusbooneysiinta ballanqaadka ah ee loogu talagalay Android Lollipop ee taxanaha Xperia Z ay bilaabi doonto in la geeyo bisha Febraayo ee soo socota.
CES 2015: ZTE S Pro 2, Mobile Hotspot, Projector iyo Qalabka Android Dhamaantiis Hal
Maanta waxaan soo bandhigeynaa ZTE S Pro 2 oo ah barta moobiilka lagu raaciyo oo lagu daray borojektar iyo aaladda Android 4.4.2
Sida loo cusbooneysiiyo Vodafone's Samsung Galaxy S5 ilaa Android 5.0 Lollipop
Hoos waxaan ku sharaxayaa nidaamka la raacayo, laba siyaabood oo kala duwan si loo cusbooneysiiyo Vodafone Samsung Galaxy S5 ilaa Android 5.0 Lollipop.
Sawirada 3D ee Xiaomi Mi4s waa la sifeeyaa
Waxaan horeyba u haysannay sawirradii ugu horreeyay ee Xiaomi Mi4s, casriga casriga cusub ee soo saaraha Aasiya oo la soo bandhigi karo Janaayo 15
Xiaomi Redmi 2, waxaad ku haysataa Isbaanish 150 euro
Xiaomi RedMi 2 hadda waa la iibinayaa, taleefanka casriga ah ee dhexdhexaad ka ah soo saaraha Aasiya ee aad ku haysan karto guriga 150 euro
LG iyo Audi smartwatch waxay la shaqeeyaan WebOS
Hadda waxaan kuu keenaynaa lama filaan aad u xiiso badan: LG smartwatch-ka xasaasiga ah ee loo sameeyay Audi wuxuu la shaqeeyaa WebOS
20000 kun oo Nokia N1 ah ayaa lagu iibiyay 4 daqiiqo oo kaliya
Kiniiniga Nokia N1 ayaa lagu iibiyay dalka Shiinaha iyadoo 20000 oo unug lagu iibiyay 4 daqiiqo oo kaliya. Kiniin u yimaada inuu la tartamo iPad Mini 3
More Xiaomi Mi 5 dillaac, 5.1mm oo dhumucdiisuna tahay taleefanka ugu dhuuban adduunka
5.1 millimitir qaro weyn, Xiaomi Mi5 waa taleefanka ugu dhuuban adduunka. Su'aashu way sii jirtaa haddii ay la imaan doonto qalabka 'Snapdragon 810 chip'
Samsung Penvatars oo dhawaan imanaysa Xusuusin 4 iyo Xusuusin 4 Edge
Samsung Penvatars wuxuu qarka u fuulayaa inuu noqdo run dhab ah mabda 'ahaan qoraalka Samsung Galaxy note 4 iyo Note 4 Edge.
Polaroid wuxuu yimid CES ee Las Vegas isagoo soo bandhigaya laba kiniin oo hooseeya, L7 iyo L10 kuwaas oo lagu garto haysashada Android 5.0 Lollipop iyo chips quad-core
[SWEEPSTAKES] HTC Desire 816 oo wata Androidsis iyo HTC Spain
Androidsis oo kaashaneysa HTC Spain waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo HTC Desire 816 raafka kaas oo aad awood u yeelan doonto inaad ku hesho taleefanka casriga ah ee casriga ah ee gabi ahaanba bilaash ah.
CES 2015: Kuwani waa warka ka imanaya ZTE
Dhacdada ugu muhiimsan ee tikniyoolajiyadda bilowga sanadka, ee CES 2015, waxay na tusayaan waxa wararka soo socda ee ZTE noqon doonaan.
Ma jeceshahay kiniinnada waaweyn? Hagaag, bahalkan 65-inji ah ayaa ku jeclaan doona
Fuhu waxay ku soo bandhigtay CES 2015 magaalada Las Vegas taxane kiniinno cusub ah oo cabbirkoodu u dhexeeyo 45 ilaa 65 inji iyo processor NVIDIA
Noocyadii hore ee barnaamijyada Microsoft Office ee loogu talagalay kiniiniyada Android horeyba ugu jiray Play Store
Laga soo bilaabo Play Store, barnaamijyada Microsoft Office sida Word, Excel iyo PowerPoint ayaa hadda loo heli karaa kiniinno
LG G Flex 2 Tilmaamaha Rasmiga ah
Waxaan horeyba uga ogaanay qeexida rasmiga ah LG G Flex 2 gacanta dowlada Kuuriya lafteeda.
Asus waxay ku dhawaaqeysaa Fonepad 7 oo leh shaashad 7-inch ah, labo SIM iyo wicitaano cod ah
Asus waxaa lagu soo bandhigay sanad ka hor CES ee Las Vegas Fonepad 7, si sanadkaan ay u keento dib u eegista cusub qaybaha la cusbooneysiiyay
Samsung waxay si rasmi ah u muujineysaa Galaxy A7
Galaxy A7 durba waa dhab oo toddobaadyada soo socda waxaa si rasmi ah u soo bandhigi doona Samsung. Illaa iyo hadda waxaa lagu muujiyay Malaysia
Audi wuxuu adeegsadaa LGw smartwatch cusub oo cajiib ah shirkiisa jaraa'id
Audi waxay isticmaashay a LG enigmatic smartwatch intii lagu jiray shirkii jaraa'id. Waxay umuuqataa inay noqon doonto saacad si gaar ah loogu talagalay soo saaraha.
Lenovo wuxuu muujinayaa kaniiniyada hoose ee TAB 2 A7-10 iyo A7-30
Lenovo waxay soo bandhigeysaa laba kaniini oo cusub oo leh shaashad 7-inch ah oo qiimahoodu yahay qiyaastii 99 doolar. Waxa ugu xun ayaa ah inaysan haysan kaamiro
Oppo U3, taleefan leh shaashad 5,9-inji ah iyo kamarad 13MP ah oo leh 4x zoom optical ah
Oppo U3 waxay leedahay muraayad muuqaal ah oo ka mid ah astaamaha lagu kala garto waxyaabaha ugu waaweyn marka la barbar dhigo aaladaha kale ee tartanka
Telefoonkii ugu horreeyay ee Kodak ayaa la yimid kamarad 13MP ah
Taleefanka casriga ah ee Kodak IM5 waa taleefan 5-inji ah oo leh kamarad 13MP ah oo la filayo inuu tayo sare ku yeelan doono sawir qaadista
HTC Desire 320, oo ah terminal-dhamaadka-hoose oo u istaagi doona sicirka la hagaajiyay
HTC waxay soo bandhigtay taleefankii ugu horreeyay ee sanadka: HTC Desire 320, oo ah terminal ay ku jiri doonaan heerka ugu hooseeya ee qaybta.
LG G Flex 2: LG wuxuu adduunka tusinayaa bahalkeeda cusub ee shaashadda qalooca
LG waxay hadda soo bandhigtay LG G Flex 2015 oo la filayo CES 2, oo ah terminal leh astaamo kor ugu qaadaya qaybta sare
Xiaomi Redmi 2 waxaa lagu soo bandhigay Snapdragon 410 64-bit chip $ 119
Taleefan leh 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 chip iyo shaashad 4,7-inji ah oo kaa caawin doonta inaad wax ka qabato ciyaaraha Android $ 119
Samsung Galaxy S6 miyaa lagu soo bandhigay xayeysiiska Samsung Knox?
Samsung Galaxy S6 miyaa lagu soo bandhigay xayeysiiska Samsung Knox? Markaad fiiriso sawirka aaladda, waxay sifiican u noqon kartaa calanka Kuuriya xiga
Samsung waxay u baahan tahay inay dib isu cusbooneysiiso, Samsung Galaxy s6 ayaa calaamadeyn doonta kahor iyo kadib?
Maqaalka fikradda ee ku saabsan isbeddelada Samsung ay tahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dhagaystayaashiisa Samsung Galaxy S6
Huawei Honor 6 Plus ayaa hadda loo heli karaa 345 euro
Waxaan hadda ka iibsan karnaa Huawei Honor 6 Plus at Oppo Mart qiimo aad u soo jiidasho leh: 345 euro
Cusboonaysiinta ku socota Android 5.0 ee Samsung Galaxy Note 3 waa la sifeeyey
Cusboonaysiinta ku socota Android 5.0 L ee Samsung Galaxy Note 3 SM - N9005 ayaa la helay. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo cusbooneysiiyo boosteejadaada
OnePlus One wuxuu si rasmi ah u helaa Android 5.0
In kasta oo cusbooneysiintu wali dhibaatooyin leedahay maxaa yeelay waa marxalad Alpha, OnePlus One wuxuu si rasmi ah u helaa Android 5.0.
Ku bilow 2015 10 barnaamij oo waaweyn oo taleefankaaga Android ama kaniiniga ah
10 barnaamij oo loogu talagalay Android si ay ugu bilaabaan sanadka kuwa ugufiican ee lagu rakibay taleefankaaga sida Pushbullet, Link Bubble ama Nokia Halkan Maps
Samsung Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge iyo Galaxy S4 waxay heli doonaan Android 5.0 bisha Janaayo
Waxaan horey u ogaanay taariikhda qalabka Samsung ee aan wali helin Android 5.0 L ay awoodi doonaan in la cusbooneysiiyo: inta lagu jiro bisha Janaayo
Xiaomi Arch, oo ah taleefan casri ah oo leh shaashad qafiif ah si loola tartamo Xusuusin Edge
Sawir ka mid ah taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Mi' oo cusub ayaa la soo daayay, Xiaomi Arch, kaas oo u istaagi doona labadiisa dhinac ee qalooca
Sida loo rakibo Android Lollipop Samsung Galaxy Note 3 gacanta adoo wata Odin 3.0.9. Daadinta Samsung Firmware Original
Shirkada Isbaanishka ee Samsung Galaxy S5 ayaa durbaba heleysa Android 5.0 Lollipop
Haddii aad isticmaale ka tahay Samsung Galaxy S5 ee Spain waxaad ku jirtaa nasiib maxaa yeelay soo saaraha Kuuriya ayaa sii daayay casriyeynta rasmiga ah ee Android 5.0
Xog cusub ayaa ka hadlaysa in Samsung Galaxy Tab 4 Lite ay ku kacayso 99 doolar, in ka yar 100 Yuuroo oo la beddelo
OnePlus Two ma yeelan doonaa laba SIM iyo kaarka micro SD-ka?
Fiidiyowga xayaysiinta ee OnePlus wuxuu muujinayaa taageerada kaararka micro SD-ka oo lagu daray laba SIM. OnePlus Laba aragti ah?
LG G3 ayaa ku qarxaya joodariga gebi ahaanba
Cajiib ah laakiin run ah. LG G3 ayaa qarxa inta uu kujiro sariirta oo gebi ahaanba maraya furaash
Samsung waxay daabacdaa xayeysiis kirismas ah oo qosol leh oo xusuusineysa in Galaxy S5 aysan biyuhu lahayn
Samsung ayaa daabacday xayeysiis cusub oo muujinaya baraf barafoobay oo nolosha la keenay Samsung Galaxy S5
ASUS waxay soo bandhigeysaa Pegasus X002 oo leh shaashad 5-inji ah, 64-bit afar geesle ah iyo 2GB RAM oo ah $ 129
ASUS waxay ku dhawaaqeysaa Pegasus X002, taleefan leh quad-core chip, 2 GB oo RAM ah iyo shaashad 5-inji ah oo qiimaheedu yahay 129 doolar.
Samsung Galaxy Note 2 sidoo kale wuxuu heli doonaa casriyeyn rasmi ah oo ku saabsan Android Lollipop
Samsung Galaxy note 2 wuxuu lahaan lahaa cusbooneysiin hurdi ah oo rasmi ah oo ay Samsung ku xaqiijisay.
Waxaa jiri doona oo kaliya 100 cutub oo Samsung Galaxy Alpha ah oo leh maqaarka dhabarka maqaarka
Samsung Galaxy Alpha xaddidan daabacaadda, nooca cusub ee Samsung oo leh jir ka sameysan maqaar kaas oo keliya 100 unug oo nooc kasta ah la soo saari doono
Samsung waxay bilaabaysaa soo saarida modululada xasuusta 8GB RAM ee aaladaha mobilada
8GB RAM modules ayaa ku imaan doona aaladaha ugu horeeya sanadka 2016, halka 4GB uu bilaabi doono in lagu daro 2015
Meizu wuxuu soo bandhigayaa M1 Note, telefoon 5.5 ″ ah, 2GB oo RAM ah iyo 64-bit Mediatek octa-core chip
Qiimo aan gaarin heerka sarrifka ee € 157, Meizu wuxuu doonayaa inuu suuqa ku jebiyo M1 Note
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Ascend GX1, "phablet" oo leh shaashad 6 'ah iyo afar geesle Snapdragon 410 chip
Shirkadda Huawei ee Ascend GX1 ayaa ahmiyad gaar ah siisa sida ugu badan ee looga heli karo booska hore ee taleefanka
Fiidiyowyo cusub ayaa muujinaya Samsung Galaxy Note 4 iyo Note Edge oo ku shaqeeya Android 5.0.1
Laba fiidiyow oo cusub ayaa muujinaya Samsung Galaxy Note 4 iyo Note Edge oo ku shaqeeya Android 5.0.1 Lollipop, oo ah noocii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Google.
Hormarinta weyn ee Android Wear Lollipop shaki la’aan waa nolosha batteriga, iyadoo la gaarsiinayo horumarin 100 x 100 ismaamul ah.
Nokia C1 waa taleefan Android ah oo la socon doona kumbuyuutarka Nokia N1 ee la arkay bishii hore. Waa wax lala yaabo iyo ku dhawaaqis ujeeddo ah
Fiidiyowga HTC One M8 oo leh Lollipop-ka Android
Waxaan horeyba uheynay fiidiyowyadii uguhoreeyay ee aan ku aragno HTC One M8 oo ficil ah oo leh Lollipop Android.
Sawirada HTC One M8 waxaa lagu sifeeyay Sense 6.0 iyo dhadhankiisa Android 5.0 Lollipop
Sense 6.0 wuxuu u keeni doonaa dadka isticmaala HTC One M8 wanaagga iyo faa'iidooyinka Android 5.0 Lollipop marka la eego naqshadeynta iyo shaqeynta
Sida loo suuro geliyo laba tuubbo si aad u toosiso Nexus 6 [ROOT]
Haddii aad leedahay xidid rujin ah Nexus 6, maanta waxaan ku tusineynaa sidaad u suuro gelin laheyd laba jibbaar si aad u kiciso Nexus 6.
[APK] Soo degso oo ku rakib muuqaalka HTC mid kastoo Android ah
Maanta waxaannu kaaga tagnay apk si aad ugu rakibto gacanta wixii Android ah, kana soo qaadashada 'HTC gallery', oo ah codsi muuqaal qurux badan oo si buuxda u shaqeynaya oo ku saabsan moodellada kale ee istiraatiijiyadaha Android.
Micromax YUREKA waa taleefan casri ah oo cusub oo wata CyanogenMod
CyanogenMod 11 waa nooca ROM-ka ee laga helo casriga cusub ee Micromax YUREKA oo laga bilaabi doono Hindiya.
Astaamaha Samsung Galaxy E7 waa la xaqiijiyay
Samsung ayaa loo maleynayaa inay yareyn doonto noocyadeeda kala duwan sanadka soo socda, oo ay dhiirigelisay natiijooyinka xun ...
Hadda waad iibsan kartaa Meizu MX4 Pro
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Meizu MX4 Pro adoo adeegsanaya dukaan Shiineys ah oo kuu soo diraya ugu badnaan hal usbuuc gudahood 441 euro.
MyRoll Gallery, waa sawir sawiro xasaasi ah oo loogu talagalay taleefankaaga casriga ah iyo casrigaaga casriga ee 'Android Wear'
MyRoll Gallery waa sawir sawir xamaasad leh iyo sawirkii ugu horreeyay ee sawir-qaadashada ee Wear-kaaga Android.
Sony waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto Xperia Z4 Tablet Ultra oo leh shaashad 12,9-inji ah
Qalab cusub oo cabbirkiisu weyn yahay oo ay leedahay Sony oo leh Xperia Z4 Tablet Ultra oo leh shaashad 12,9-inji ah
Sony waxay kubilaabaysaa bandwagon-soo-uruurinta iyadoo leh soo jeedin aad u xiiso badan
Sony waxay bilaabeysaa olole ay ku soo uruurineyso Qrio Smart Lock, quful smart.
Shirkadda Huawei waxay soo bandhigtay Honor 6 Plus, oo ah taleefan casri ah oo leh shaashad dhan 5,5 inji, octa-core chip iyo 3G oo RAM ah
Shirkadda Huawei ayaa hadda soo bandhigtay Huawei Honor 6 Plus, telefoon dhan 5,5-inch oo shaashadda ah, 3GB oo RAM ah iyo qalab octa-core ah
Isticmaalaha Samsung Galaxy Note 3 ee Vietnam wuxuu ka helaa Android 5.0 adoo adeegsanaya OTA
Isticmaalaha Samsung Galaxy Note 3 ee Vietnam ayaa helay cusbooneysiinta Android 5.0 iyada oo loo marayo OTA. Samsung miyey cusbooneysiineysaa cusbooneysiinta Vietnam?
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 talaabo talaabo ah iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay CM12 aan rasmi ahayn Android 5.0.1 Lollipop
LG ayaa hada soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeyneyso in nooca bilaashka ah ee LG G3 uu durbaba helayo Android 5.0 Lollipop
Maanta waxaan wajahnay HTC Desire 816 oo la yaab leh qaabka caalamiga ah ee LG G2. Ayaa ku guuleysan doona dagaalka LGG2 VS HTC Desire 816 duel?
Waxaa xaqiijisay Motorola in cusbooneysiinta Moto 360 ilaa Android Lollipop la geyn doono adduunka oo dhan maanta, December 15, 2014.
Halkan waxaan ku tusayaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad gacanta ku cusbooneysiiso LG G Watch si Nacnac ah oo aadan u dhiman isku dayga
Fiidiyowga waxaad ka baran kartaa sida loo furo bootloader-ka taleefanka Xperia haddii aad raacdo dhammaan tallaabooyinka ka muuqda casharka
Huawei Ascend Mate 7 Monarch, nooca ugu sarreeya ee Shiinaha Shiinaha leh sapphire crystal
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigtay Huawei Ascend Mate 7 Monarch, oo ah nooca fitamiinnada ee Shiinaha shilalka ah ee u taagan masayrkeeda safayr
Maanta waxaan ku tusineynaa sawirradii ugu horreeyay ee Sony Xperia E4, oo ah terminal-ka cusub ee bartamihii-dhexe ka yimid soo saaraha Japan.
Xanta cusubi waxay xaqiijinayaan qeexitaanka Sony Xperia Z4 Compact iyo Sony Xperia Z4 Ultra
Dukumiinti ayaa la daadiyay oo xaqiijineysa astaamaha farsamo ee Sony Xperia Z4 Compact iyo Z4 Ultra, oo lagu soo bandhigi doono CES 2015
Samsung ayaa bilaabi doonta nooc ka mid ah Samsung Galaxy Note 4 oo leh processor Snapdragon 810
Samsung ayaa qorsheyneysa inay soo saarto nooc Samsung Galaxy Note 4 ah oo ay la socoto processor-ka Qualcomm Snapdragon 810 ee Koonfurta Kuuriya
Telefoonkii ugu horreeyay ee adeegsada Gorilla Glass 4 waa Samsung Galaxy Alpha
In kasta oo looxyada cusub ee Corning Gorilla Glass 4 loo soo bandhigay si rasmi ah dhawaanahan, Galaxy Alpha horeyba wuxuu uxirmay gudigan.
Nexus 5 wuu dhintay, ha noolaado boqorka!
Google ayaa ku dhawaaqday dhamaadka soosaarka Nexus 5, kaas oo laga heli doono Google Play illaa Maarso 2015
Blue Charm, noocyada cusub ee qalabka Meizu ayaa la soo bandhigi doonaa Diseembar 23
Meizu waxay soo bandhigi doontaa khadkeeda cusub ee Blue Charm aaladeeda 23-ka bisha Diseembar, taas oo ka duwanaan doonta casriga ilaa router
Huawei Honor 4X, sawirro xaday iyo astaamahooda farsamo
Sawiradii ugu horreeyay ee Huawei Honor 4X ayaa la soo daadiyay, taas oo garaaci doonta mahadnaqa processor-ka Huawei Kirin 620.
Waxaa lagu heli karaa iyada oo aan lagu casuumin OnePlus One 16 GB oo ah 269 euro
Haddii aad rabto OnePlus One, ragga ku jira OnePlus ayaa kaa iibin doona iyaga oo adeegsanaya websaydhkooda, iyaga oo aan lahayn wax casuumaad ah ama sii-qabsi ah: adigu waad iibsataa oo gurigay ku qaataan.
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: Nexus 6 VS HTC Desire 816
Waxaan sii wadaynaa tijaabooyinka xawaaraha Androidsis, markan waxaan wajahaynaa awoodaha weyn ee Nexus 6 VS HTC Desire 816. Ayaa ku guuleysan doona dagaalka?.
Vivo X5Max waa taleefanka ugu dhuuban adduunka waana 4,75mm
Vivo X5Max ayaa hada looga dhawaaqay dalka Shiinaha wuxuuna imaan doonaa dhamaadka bishaan gobolo kala duwan iyadoo qiimaha ugu dhow uu yahay 485 dollar
Dib u eeg HTC Desire 816, terminal xasaasi ah oo Android ah oo kaliya 300 Euros
Maqaalkan cusub waxaan ku aragnaa dib-u-eegista HTC Desire 816, oo ah terminaal xasaasi ah oo Android ah oo kaa yaabin doona qiimaha lacagtiisa.
Nexus 6 wuxuu ku sigtay inuu yeesho dareeraha faraha
Google iyo Motorola's Nexus 6 waxay doonayeen inay dhexgalaan dareeraha faraha, inkasta oo Google aakhirkii fikradda baabi'isay.
Tijaabada xawaaraha: Nexus 6 VS LG G2
Maanta waxaan wajaheynaa tijaabada xawaaraha shaqsiyadeed, Nexus 6 VS LG G2, laba terminaal oo ay u kala sareeyaan koox qiimo weyn leh.
ZTE Q7 wuxuu maraa Tenna
Waxay u muuqataa in ZTE uu ku dhow yahay inuu soo bandhigo casriga casriga ah. Waana in ZTE Q7 ay aragtay shirkadda 'Tenna', oo ah hay'adda Aasiya ee shahaadada aaladda, halkaas oo aan awoodnay inaan ku aragno naqshadda casriga casriga cusub ee soo saaraha Shiinaha. Taasi miyaanay u ekaanayn telefoon Apple gaar ah?
Waxaan tijaabinay Motorola Nexus 6
Dib-u-eegidgan cusub waxaan si fiican u tijaabineynaa Motorola Nexus 6 oo muddo dheer la sugayay waxaanan ku siineynaa dareenkeenna ugu horreeya.
LG waxay soo bandhigaysaa G Watch R2 oo leh LTE at MWC 2015
LG wuxuu soo bandhigi karaa LG G Watch R2 isagoo ka faa'iideysanaya imaatinka MWC 2015 ee magaalada Barcelona
Meizu K52, taleefan casri ah oo leh sideed buundo 100 euro ah
Meizu waxay ka shaqeyneysaa Meizu K52, oo ah taleefan casri ah oo leh processor 8-core ah oo ku kacaya 105 euro. Gorgortan dhab ah oo la arko faa iidooyinkeeda
Sawirro cusub oo Mi5 ah ayaa na tusaya dhinacyadiisa
Sawirro cusub oo xaday Xiaomi Mi5 ayaa muujinaya dhinacyadiisa iyo looxyada hore
Soo bandhig !! LG G Watch 99 Euros waqti xaddidan
Hadda waa waqtigii lagu heli lahaa LG G Watch oo kaliya 99 Euros oo leh qiimo dhimis 100 Euro ah waqti xaddidan
Samsung way beenisay inay dib u isticmaashay baararka AMOLED
Samsung ayaa beenisay eedeymaha loo haysto shaqaale sheeganaya oo sheeganaya in soo-saaraha uu adeegsado qalabka dib loo rogay ee AMOLED si uu u sameeyo SAmsung Galaxy Note 4
Lenovo K3 «Music Lemon» taleefanka si uu ula tartamo Xiaomi Redmi in ka yar $ 100
Ujeedada Lenovo K3 Music Lemon way cadahay: waji ka waji ka dhanka ah Xiaomi Redmi oo leh taleefan aan ka badnayn 100 doolar
AnTuTu wuxuu xaqiijinayaa qeexitaanada Samsung Galaxy S6: 5.5 screen Quad HD screen iyo Lollipop
Samsung Galaxy S6 wuxuu la imaan doonaa shaashad dhan 5.5-inch Quad HD iyo Android Lollipop. Calanka cusub wuxuu ka socdaa AnTuTu
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S5 ilaa Android 5.0 Rasmiga gacanta
Hoos waxaan ku faahfaahinayaa habka loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S5 ilaa Android 5.0 Rasmiga
6.7 milyan oo isticmaale ayaa iska diiwaan galiyay inay iibsadaan Meizu MX4 Pro
Waxay u muuqataa in Meizu MX4 Pro uu noqon doono kan ugu iibsiga badan Shiinaha, halkaas oo 6.7 milyan oo isticmaale ay iska diiwaangeliyeen inay helaan cutub.
Tani waa sida Android 5.0 u eegi doono Samsung Galaxy Note 4
Maanta waxaan kuu keenaynaa muuqaal aad ku arki karto waxa Sansung Galaxy Note 4 oo wata 5.0 Lollipop oo u eg
Waxaan tijaabinay SPC GLOW 9.7 Retina, oo ah kiniin qurux badan
Kacaanka kiniiniyada ayaa ah mid haddii aysan ahayn adeegga wicitaanka in ...
Android 5.0 wuxuu bilaabmayaa inuu si rasmi ah u yimaado Samsung Galaxy S5 Yurub
Samsung waxay durba soo saareysaa Android 5.0 Samsung Galaxy S5, waxayna ka bilaabaneysaa Poland si ay u gaarto wadamada kale ee Yurub
Kiniinkaaga ugu beddel buug xusuus qor leh 'Saanpad Stylus'
Noocyada 'Saanpad Styles' waa qalab aad u fudud oo noo oggolaanaya inaan wax ku qorno kiniinkeenna iyadoo aan gacan ka geysaneyno annaga oo aan hal dhibic ka tagin.
Puzzlephone, waa taleefanka gacanta ee lagula tartami karo mashruuca Ara
2015 waxay noqon doontaa sanadka uu taleefankan casriga ah ee cusub ee laga bilaabo bilowga Thai ee soo bandhigi doona Puzzlephone uu arko iftiinka
[ROOT] Soo degso oo ku rakib kumbuyuutarka Samsung Galaxy S5 aalad kasta oo Android ah
Waa kuwan dhammaan faylasha lagama maarmaanka u ah soo dejinta iyo rakibidda kumbuyuutarka Samsung Galaxy S5 ee Android kasta, iyo sidoo kale habka rakibidda saxda ah.
Kamaradda RE ee 'HTC' RE Camera ayaa hadda diyaar u ah iibsashada
Maanta RE Camera-ka ay soo saartay shirkadda HTC ayaa la iibiyay, kaamiro dhan-dhul ah oo kugula socon doonta dhammaan xiisahaaga.
Maanta waxaan sharxayaa sida loo cusbooneysiiyo LG G2-keedii ugu dambeysay asalka Yurub ee D80220H. Hal dariiqo oo loo hayo xididka iyo soo kabashada iyo mid kale oo looga tago warshadda iyada oo aan xidid lahayn iyo keydkii hore ee LG Recovery.
Jijimadii Cicret, jijimihii mustaqbalka ama been abuur kale oo Android ah?
Cicret Bracelet waa fikrad waali ah oo jijin mustaqbalka ah oo laga bilaabo daqiiqada ugu horeysa urta khiyaanada oo kaliya raadineysa in lacag fudud lagu helo iyada oo kharash laga helayo dadka riyoonaya ee raadinaya tikniyoolajiyadda mustaqbalka.
LG G Flex 2 waxaa lagu soo bandhigi doonaa CES 2015
LG G Flex 2 wuxuu imaan doonaa bilowga sanadkaan waxaana lagu soo bandhigi karaa CES 2015, oo dhacaya inta lagu jiro usbuuca ugu horeeya bisha Janaayo magaalada Las Vegas.
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear; Maanta Binary Watch Face
Maanta waxaan kugula talineynaa Binay Watch Face, oo ah binary watchkaaga Android Wear. Waxaan sidoo kale ku darayaa sharaxaad ku saabsan sida noocan ah saacadaha binary u shaqeeyaan.
Samsung waxay nagula yaabi doontaa Samsung Galaxy S6 cusub
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Samsung Galaxy S6 waxay muujinayaan warar aad u xiiso badan, sida nashqadeyntiisa la cusbooneysiiyay ama hagaajinta lakabkeeda TouchWiz
Sony Mobile waxay diyaarisaa dalabyo aad u xiiso badan jimcaha madoow
Markii ugu horreysay Sony Mobile Spain waxay ku biiraysaa Black Friday 2014 oo ay la socdaan dalabyo aad u xiiso badan oo loo marayo dukaankooda internetka.
Sonim XP7 Extreme, oo ah taleefanka casriga ah ee ugu adag waddada dhinaceeda oo leh 41 maalmood oo ismaamul ah
Waxaad haysan doontaa maalmo 41 ah oo batari ah oo leh Sonim XP7 Extreme smartphone kaas oo u imanaya inuu la socdo xiisaha cayaaraha aadka u daran
Vexia waxay soo bandhigtaa kiniiniyada 'Big Hero 6' ee loo yaqaan 'Disney's Big Hero XNUMX' waxayna cusbooneysiineysaa noocyadeeda kala duwan ee qalabka Android
Vexia maanta waxay soo bandhigtay aalado cusub oo Android ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Zippers 5 iyo Vexia Tab 8i Hero.
Qalabka Samsung waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato socodsiinta codsiyada Qalabka Naqshadeynta
Saldhigyada Samsung ee aan isticmaalin Android 5.0 Lollipop waxay dhibaato kala kulmi doonaan qaar ka mid ah codsiyada adeegsada Qalabka Naqshadaynta.
Iibinta Samsung Galaxy S5 ayaa aad uga hooseeyay sidii la filayay
Xogtii ugu dambeysay ee iibka ee Samsung Galaxy S5 ayaa muujineysa inay iibiyeen 40% kayar tii ka horeysay
Soo dejiso oo rakib nooca ugu dambeeya ee barnaamijka Xperia Z3 Walkman ee ku saabsan Android kasta
Marka xigta waxaan ku tusi doonaa sida loo soo dejiyo loona rakibo barnaamijka Walkman ee Sony Xperia Z3 wax kasta oo Android 4.2 ama terminal ka sareeya
Fiidiyow cusub ayaa muujinaya Samsung Galaxy S4 oo leh Android 5.0 Lollipop
Maanta waxaan kuu keenaynaa fiidiyow cusub oo muujinaya sida kooxda Samsung ay horay ugu socoto si Samsung Galaxy S4 ay u hesho Android 5.0 sida ugu dhakhsaha badan.
Fiidiyow cusub ayaa muujinaya Samsung Galaxy S5 oo ordaya Android 5.0 Lollipop
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa fiidiyow cusub oo ka socda kooxda SamMobile, halkaas oo ay ku muujinayaan nooc cusub oo ah casriyeyntii ugu dambeysay ee nidaamka qalliinka Google ee Samsung Galaxy S5. Runtuna waxay tahay inay si fiican u duudduubto.
Ma ogtahay in Nexus 6 uu leeyahay wargelin qarsoon oo LED ah?
Yaab! Nexus 6 ee Google iyo Motorola wuxuu leeyahay ogeysiis qarsoodi ah LED-ka dusha sare.
Feejignaan la'aan, Calaamadaha iyo tusaalooyinka sawirrada laga qaaday Meizu MX4 Pro
Meizu ayaa shalay soo bandhigtay Meizu MX4 Pro.Maanta waxaan idiin soo gudbineynaa furitaanka aaladda oo ay weheliso astaamaheeda iyo tusaalooyinka qabashada kamaradeeda
Hagaaji dhibaatooyinka suurtagalka ah ee LG G2 ka dib cusbooneysiinta aan rasmiga ahayn ee loo yaqaan 'Android Lollipop'
Waa kuwan xalka dhibaatooyinka LG G2 ka dib cusbooneysiin aan rasmi ahayn oo loogu talagalay Android Lollipop.
Nokia N1 waxaa lagu arki karaa fiidiyoow
Fiidiyowga la socda maqaalkan wuxuu muujinayaa naqshadda Nokia N1, iyo sidoo kale is-dhexgalka ku saleysan Android 5.0 Lollipop
Dhamaadka sanadka 2015 Samsung waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo si buuxda isku laabmi kara
Dhamaadka sanadka 2015 Samsung waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo leh shaashad si buuxda isku laabmi kara. Waxaan ka hadleynaa taleefan casri ah ama kiniin ah oo kalabar loo laaban karo.
Marka xigta waxaan ku tusayaa sida saxda ah ee loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 5.0 Lollipop iyadoo la adeegsanayo Romkaan aan rasmiga aheyn ee ay abuureen EvoMagic.
Meizu MX4 Pro ayaa hada lagu dhawaaqay. Dhammaan 5,5 "taleefan, octa-core chip iyo kamarad 20.7 megapixel leh naqshad wanaagsan iyo dhammaystir
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear; Maanta Muuqaal Iftiin
Waqtigan xaadirka ah dhibaato ma ahayn, laakiin ma hagaajin kartid dhalaalka shaashadda ee smartwatches oo wata 'Android Wear'. Hadda Muuqaalka Muuqaalka ayaa kuu sameeya adiga.
Samsung S5 iyo iPhone 5S, keebaa casriga ugu fiican?
Waxaan ka faalloonnaa isu ekaanshaha iyo kala duwanaanshaha jira ee u dhexeeya labada moodelba, oo ay dad badani u arkeen inuu yahay mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu fiican suuqa.
Sony waxay muujineysaa dareeraha 230MP IMX21 kaas oo imaan doona Xperia-ta soo socota
Xperia X4-ka cusub ayaa suurtogal ah inuu ku daro dareemahan cusub ee IMX230 kaas oo la imanaya wajiga ogaanshaha diiradda
Isku day Samsung Gear S si bilaash ah oo leh Khibrad Gear S
Marka xigta waxaan kuu sharaxayaa inaad hubiso dhammaan waxqabadka ay Samsung Gear S na siiso, smartwatch-ka ugu fiican xilligan.
Sida loo soo dejisto Android 5.0 Lollipop OTA oo aad u cusbooneysiiso Nexus-kaaga gacanta
Ku dhammaystir cashar tallaabo-tallaabo ah si aad u cusbooneysiiso Nexus-kaaga adigoo gacanta ku soo dejinaya Android 5.0 Lollipop OTA.
Sida loo cusbooneysiiyo Nexus-kaaga Android 5.0 Lollipop gacanta
Marka xigta waxaan sharxayaa sida loogu cusbooneysiiyo Nexus-kaaga Android 5.0 Lollipop gacanta oo aan ku dhiman isku dayga.
NVIDIA Shield Tablet ayaa la cusbooneysiin doonaa Nofeembar 18 illaa Android 5.0
Ragga ku jira NVIDIA waxay ballanqaadeen in Android 18 uu imaan doono Nofeembar 5,0. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ku dhawaaqeysaa warar aad u xiiso badan.
Halkan waxaan kaaga tagayaa Dib-u-eegidgan LG G Watch ah oo aan ku tusayo aragtidayda ugu horraysa ee ku saabsan dareenkan Wareable Android Wear.
Shaandheeyay sawirka dareeraha faraha ee Meizu MX4 Pro
Waxaan horey u ogaanay faahfaahin ku filan oo ku saabsan Meizu MX4 Pro, hadda waxaan kuu soo qaadaneynaa sawirro cusub oo muujinaya aaladda sawirka faraha
Medley xanta ku saabsan Sony Xperia Z4, Xperia Z4 Ultra, Xperia Z4 Compact iyo Xperia Z4 Tablet
Shalay waxaa timid warbixin ku saabsan aaladaha cusub ee Android ee shirkadda Japan laga leeyahay ee Sony sanadkii 2015
Waxaan tijaabinay NGS Odysea 470HD
Maanta waxaan ku siineynaa dareenkeena dhabta ah ee ku saabsan NGS Odysea 470HD, oo ah terminal ku jira qiimaha kala duwan ee Motorola Moto G 2014.
Samsung waxay leedahay dhibaatooyin soo saar leh Samsung Galaxy A3 iyo A5
Samsung Galaxy A5 iyo Samsung Galaxy A3 waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga wax soo saarka ah, iyagoo leh hal qaab oo bir ah.
Waa kuwee waddammada soo galaya Samsung Galaxy Note Edge?
Ragga ka socda Sammobile waxay daabaceen waddamada uu imaan doono Samsung Galaxy Note Edge, oo ay ku jirto Spain.
Samsung waxaa laga yaabaa inay haysato kiiskeeda anteenada u gaarka ah
Samsung Galaxy A3 iyo A5 waxay dhibaato kala kulmi karaan soo dhaweynta signalada. Samsung miyuu la soo baxayaa kiis cusub oo anteeno ah?
Isbarbardhiga Android 5 Lollipop iyo KitKat ee Galaxy S4
Ragga ku jira SamMobile waxay na tusayaan isbarbar dhiga Android 5 Lollipop iyo Android Kitkat ee Samsung Galaxy S4
HTC One Mini 2 ayaa timid Spain
HTC One Mini 2 wuxuu ugu dambeyn imaan doonaa Spain, Terminal la soo bandhigay dhamaadka bisha May laakiin waxay qaadatay in ka badan 6 bilood inay si rasmi ah uga degto wadankeena.
Samsung waxay daabacdaa laba ogeysiis cusub oo Samsung Galaxy Note 4 ah
Samsung waxay sii waddaa inay soo bandhigto xayeysiis cusub oo ka hadlaya faa'iidooyinka Samsung Galaxy Note 4. Maanta waxaan kuu keenaynaa laba fiidiyow oo cusub oo ah soo saaraha Kuuriya uu xooga saarayo S Pen, oo ah aaladda ugu caansan uguna weyn ee Note ka.
Tamarta Muusigga BZ6, oo ah laacib na siiya wax ka badan inta indhaha la qabata
In kasta oo dib loo qaabeeyey, Tamarta Muusigga Tamarta BZ6 waa ciyaartoy na siin kara hawlo badan oo aad u xiiso badan.
MOD si loo hagaajiyo kamaradda Samsung Galaxy Note 4.
Meizu waxay durbaba ka shaqeyneysaa sidii ay ula qabsan lahayd Android 5.0 Lollipop qalabkeeda
Meizu waxay ka shaqeyneysaa sidii ay ula qabsan lahayd Android 5.0 Lollipop qalabkeeda kala duwan. Meizu MX4 waxay u badan tahay inuu yahay taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee hela cusboonaysiinta
Cusbooneysiinta cusub ee OnePlus One ayaa hagaajiya cilladaha kala duwan
CyanogenMod waxay soo saartay cusbooneysiin toosinaysa khaladaad dhowr ah oo OnePlus One jiidayay, cusbooneysiintan ayaa u horseedaysa xasiloonida taleefanka.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OnePlus One ayaa laga saaray awooda adeegsiga Hey! Snapdragon. Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo soo celiyo ikhtiyaarka.
Xanta cusub ee ku saabsan Samsung Galaxy S6 waxay ka hadlaan shaashad laba jibbaaran sida Note Edge
Falanqeeye warshadeed ayaa sheeganaya in Samsung Galaxy S6 uu yeelan doono shaashad qaloocan, oo leh nashqad aad ula mid ah tan 'Ed Edge', inkasta oo ay ku xidhan yihiin laba shaashadood.
Hadda waad cusbooneysiin kartaa LG G3-gaaga Android 5.0 Lollipop (nooca F300S kaliya)
Waxaan horey uheynay KDZ-ka ugu horeeya ee Android 5.0 Lollipop oo loogu talagalay qaabka LG G3 F300S, marka hadaad rabto waxaad hada cusbooneysiin kartaa LG G3-kaaga Android 5.0 Lollipop.
Sony waxay ku muujineysaa fiidiyow sida AOSP Lollipo isku-duubku ugu shaqeynayo Xperia Z3 oo leh faa'iidooyinkeeda iyo wanaaggeeda
Sawirada ugu horreeya ee Android 5.0 Lollipop-ka LG G3, waa hab fiican oo lagu cusbooneysiin karo cusbooneysiinta!
Sawiradii ugu horreeyay ee LG ee UI-ga naxdinta leh ee loo yaqaan 'Android 5.0 Lollipop' ee LG G3 horey ayaa loo sii daayay.
Samsung waxay diyaarineysaa wax soo saar ballaaran oo ah 5.9-inji 4K, oo loogu talagalay Samsung Galaxy Note 5 ee soo socota?
Samsung waxay isu diyaarineysaa inay soosaaris ballaaran ka sameyso 4-inch 5.9K muuqaal ah bisha Ogosto. Samsung Galaxy Note 5 ma noqon doonaa taleefankii ugu horreeyay ee teknolojiyaddan leh?
HTC USA waxay hada ku xaqiijisay barteeda Twitter-ka in HTC One M8 iyo M7 lagu cusbooneysiin doono 90 maalmood gudahood Android 5.0 Lollipop.
Unboxing Nexus 6: aragtida koowaad
Waad ku mahadsantahay asxaabta macmixing waxaan ku tusi karnaa kan ugu horeeya ee Nexus 6 Unboxing waxaana kuu sheegi karnaa dareenkayagii ugu horeeyay ee sheyga meel fog.
LG G Watch R ayaa hadda laga heli karaa Amazon Spain
Dukaanka Amazon wuxuu horey u haystay unugyo la heli karo oo ah LG G Watch R, oo ah smartwatch-ka ugu horeeya oo leh dial wareeg buuxa leh.
Sony waxay sii deyneysaa fiidiyow loogu talagalay Halloween oo ku saabsan cusbooneysiinta Xperia Z Android Lollipop
Cusboonaysiinta 'Android Lollipop' waxay gaari doontaa dhammaan noocyada kala ah 'Sony Xperia Z'
Samsung ayaa ku dhawaaqday Samsung Galaxy A3 iyo Galaxy A5
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday Galaxy A3 iyo Galaxy A5, oo ah laba taleefanno aad u caato ah oo macdan ah
Oppo N3 hadda waa rasmi oo leh shaashadda 5.5 ″ 1080p iyo 16MP kaameero wareegaya
Oppo N3 wuxuu leeyahay culeys gaar ah waxa sawir ka qaadanaya Android oo leh kamarad wareega 16MP
Arimaha gaarka ah ee Sony Xperia ee Baidu
Sony Xperia waxay horay u sii rakibtay galka Baidu ee ku xiran Sony goobta MyXperia
Sony Xperia Z3 iyo Xperia Z3 Compact dhibaatooyinka kamaradaha
Uma muuqato waqti fiican Sony. Ka dib natiijooyin sanadle ah oo liita, hadda waxaa jira dhibaatooyin kamarad ah Sony Xperia Z3 iyo Xperia Z3 Compact.
Shirkadda Huawei waxay ku soo bandhigtay nooc cusub Yurub gudaheeda iyadoo loo yaqaan 'Honor 6', oo ah terminal dhammaadkeedu sarreeyo oo qiimo jaban ku kacaya: 299.99 euro.
halkaan oo ah 'Android Wear' ayaa kuu oggolaaneysa inaad ogaato goobta aad hadda joogto mar walba adiga oo ku tusaya cinwaanka buuxa iyo meesha saxda ah ee Khariidadaha si toos ah qalabkaaga 'Android Wareable'. Android la wadaago
Samsung Galaxy S5 Active wuxuu imaan doonaa Netherlands bisha Nofeembar
Samsung Galaxy S5 Active ayaa la filayaa inuu soo gaaro Nederland bartamaha bisha Nofembar sidaa darteed waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa Yurub oo dhan
Wax walba oo cusbooneysiinta cusub ee Android Wear 4.4W2 ayaa na siiya
Halkan waxaan ku sharaxeynaa iyadoo la kaashanayo fiidiyow wax kasta oo cusbooneysiinta cusub ee Android Wear 4.4W2 ay na siiso
Samsung ma rabto inaan iska iloobo Galaxy Note 4
Samsung ayaa daabacday laba ogeysiis oo ay ku muujineyso fursadaha ay bixiso kaamirada iyo S Pen ee Samsung Galaxy Note 4.
Sony waxaa laga yaabaa inay diyaarinayso kiniin 12-inji ah oo leh stylus
Xanta cusubi waxay soo jeedinaysaa in Sony ay bilaabi karto kiniin 12-inch ah oo leh stylus inta lagu jiro rubuca hore ee 2015.
Meizu MX4 Pro jaangooyooyinku waa la sifeeyey
Barta caanka ah ee GFX ayaa daabacday astaamaha Meizu MX4 Pro halkaasoo aan awoodnay inaan ku xaqiijino astaamaheeda farsamo.
Faahfaahinta cusub ee Samsung Galaxy A7
Iyadoo loo marayo bogga Samsung, qaar ka mid ah faahfaahinta Samsung Galaxy A7 waa la ogaa, marka lagu daro xaqiijinta qayb ka mid ah astaamaheeda farsamo.
Sunstech wuxuu u keenaa sida ugu wanaagsan ee taleefan kasta oo casri ah uSUN300
Maanta waxaan kaala hadli doonnaa uSUN 300, oo ah taleefan casri ah oo ay sameysay shirkadda Isbaanishka ah ee Sunstech oo sida xaqiiqada ah kaa yaabin doonta.
Waxaan falanqeyneynaa oo tijaabinaynaa Tamarta Wireless BT8 Qaylada Buuq
The Energy Wireless BT8 Noise Canceling waa qalab tayo sare leh oo dhegeystayaal ah oo Bluetooth ah oo ku habboon dhamaan OS-ga suuqa ku jira.
LG F490 L, taleefankii ugu horreeyay ee LG oo wata processor-ka NUCLUN
Astaamaha LG F490 L, oo ​​ah taleefankii ugu horreeyay ee processor-ka NUCLUN ah, oo ay soo saartay LG, ayaa hadda la sifeeyey.
Lenovo waxay soo bandhigaysaa kiniiniyadeeda cusub ee Android-ka ah ee Spain loogu talagalay Kirismaska
Lenovo wuxuu keenayaa 3 soo jeedin sida kiniiniyada Android ee qoyska Yoga oo leh qiimo aad u jaban
Samsung Galaxy Golden 2, oo ah taleefan casri ah oo leh dabool iyo astaamo heer sare ah
Qalab aad u xiiso badan ayaa soo maray TENNA. Waxaan ka hadleynaa Samsung Galaxy Golden 2, oo ah taleefanka casriga ee Android oo leh dabool iyo astaamo heer sare ah.
Tilmaamaha Samsung: Nacnac on Samsung Galaxy Note 4 sanduuqa?
Laga soo bilaabo gacanta sawirka Samsung Galaxy Note 4 waxaan ka helnay tilmaamo Samsung ku saabsan cusbooneysiin deg deg ah oo loogu talagalay Lollipop ee Xusuusin 4.
Samsung Galaxy Note 4 wuxuu adeegsadaa kamarad Sony ah
Ka dib markii la furay Samsung Galaxy Note 4 waxaa la ogaaday in uusan isticmaalin lens-ka 'ISOCELL lens', laakiin uu yahay aaladda loo yaqaan 'Sony IMX240 sensor'.
Android Wear WatchFaces waxay noo ogolaaneysaa inaan u qaabeyno saacaddeena gaarka ah ee loo yaqaan 'Android Wear' hab gebi ahaanba bilaash ah.
Laga bilaabo maanta waxaad ka iibsan kartaa Nexus 9 Amazon.com oo ah sii-sii-hayn horay loo sii deyn doono oo la soo rari doono laga bilaabo Nofeembar 3 ee soo socota
Xanta ugu horeysa ee ku saabsan Sony Xperia Z4 waxay muujineysaa bahal wata shaashad 2K ah
Xanta ugu horeysa ayaa durba soo ifbaxeysa oo ku saabsan Sony Xperia Z4 in ay lahaan karto processor processor Qualcomm Snapdragon 810.
Halkan waxaad ku haysaa isbarbardhigga u dhexeeya Nexus 6 iyo LG G3 si aad u go'aansan karto midka u qalma ee la xiriira qiimaha lacagta
Nexus 6 ma yahay mid biyo diidaya?
Sida laga soo xigtay bogga Motorola, Nexus 6 waa biyo-diid, inkasta oo websaydhka Google uu si kale u muujinayo.
Jawaabaha Androidsis: Natiijooyinka sahaminta cusub ee Google Nexus
Androidsis waxay ka jawaabaysaa su'aasha haddii aad ku iibsan lahayd Google Nexus cusub qiimayaashan hadda iyo sidoo kale haddii aad dooran lahayd Xusuusin 4 si loo waxyeeleeyo Nexus 6.
Cusboonaysiinta rasmiga ah ee Samsung
Halkan waxaad ku leedahay liiska rasmiga ah ee Samsung Updates ee Android 4.4.4 Kit Kat. Haa, haa, si sax ah ayaad u aqrisay, Android 4.4.4 Kit Kat not android 5.0 Lollipop.
Waxaan horey u helnay Nexus 6, oo ah terminalka ugu qaalisan taxanaha Nexus
Ugu dambeyntii waa rasmi, waxaan horeyba u haysannay Nexus 6, oo ah kan ugu weyn uguna qaalisan taariikhda ee taariikhda Nexus ee Google.
Waxaan horeyba u haysannay qiimaha Nexus 6 iyo Nexus 9 ee la daadiyay iyadoo la sugayo xaqiijinta rasmiga ah ee Google
Twitter for Android Wear wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka helno akoonkeena Twitter saacadaha casriga ee leh nidaamka hawlgalka Android Wear.
Cusboonaysii taariikhaha ilaa Android 4.4.4 qalabka Samsung
Samsung ayaa hadda muujisay jadwal faahfaahsan oo ay ku sharraxayso waxa ay noqon doonto taariikhda cusbooneysiinta ee Android 4.4.4 qalabka Samsung.
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta Xidho Browser Internetka
Wear Internet Browser waa biraawsar Websaydh dhammaystiran oo si gaar ah loogu talagalay inuu si buuxda ugu shaqeeyo qalabka Android Wear sida Moto 360.
Dib u eegista Moto 360, smartwatch-ka ugu soo jiidashada badan ee wata 'Android Wear'
Ka dib markii aan tijaabino Moto 3 muddo 360 todobaad ah, waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegis aad u dhameystiran oo ku saabsan Motorola smartwatch cusub.
Motorola si ay mar kale u sameyso kiniinno marka Lenovo ay dhameystirto iibkeeda Google
Maamulaha guud ee Lenovo ayaa xaqiijiyay in, marka la soo gabagabeeyo iibka Motorola, soo saaraha uu ku laaban doono qaybta kiniinka
Meizu MX4 ayaa la soo bandhigi karaa Oktoobar 20 wuxuuna ku kacayaa wax ka yar 250 euro
Sawirrada qaar ayaa la dusiyay, marka lagu daro macluumaad cusub, oo ku saabsan Meizu MX4 Pro, oo la soo bandhigi karo Oktoobar 20,
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo Wear Mini Launcher, Launcher kii ugu horeeyey ee loo yaqaan 'Android Wear' kaas oo na siiya waxqabad iyo waxtar u qalma in la xuso.
Imtixaanka iska caabinta ee Samsung Galaxy Note 4
Samsung Berri wuxuu ina tusayaa tijaabooyinka adkeysiga adag ee wajahaya Samsung Galaxy Note 4 kahor iibka rasmiga ah.
HTC waxay daabacdaa fiidiyowyo qaarkood oo muujinaya fursadaha Aragga Aragga
HTC waxay daabacday fiidiyowyo taxane ah oo muujinaya faa'iidooyinka Indhaha Khibradda, codsigeeda cusub ee moodooyinka ugu dambeeyay ee soo saaraha
Samsung Protection Plus, caymiska taleefannada casriga ah ee laga helo soo saaraha Kuuriya
Samsung Protection Plus Mobile Elite waa caymis loogu talagalay Galaxy S4 / S5 iyo Galaxy Note 3/4 oo ay bixiso shirkadda Korea ee Mareykanka.
Lenovo wuxuu ku dhawaaqay 2-inch iyo 8-inch YOGA Tablet 10 iyo Pro Edition oo leh borojektar iyo subwoofer
Lenovo wuxuu soo bandhigayaa 2 iyo 8-inch YOGA Tablet 10 oo leh nooc Pro 13 ah
Shirkadda ZTE Spain ayaa boggeeda Facebook ku shubta 20 taleefannada casriga ah
ZTE Spain waxay siin doontaa 20 taleefannada casriga ah oo tayo wanaagsan leh dhammaan kuwa ka qayb qaadanaya boggeeda Facebook laga bilaabo maanta illaa Nofeembar 30
[APK] Ku rakib nooca Chromecast 1.8.22 ikhtiyaar u leh in aad u qaabeeysid gidaarka gidaarada
Halkan waxaan toos kuugu dhaafayaa qaabka APK, nooca cusub ee 1.8.22 ee Chromecast oo leh ikhtiyaarka Backdrop ee noo oggolaanaya inaan qaabeyno waraaqaha derbiga ee Chromecast-keena.
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhig u dhexeeya HTC One M8 iyo HTC Desire EYE, shaqooyinka hadda socda ee soo saaraha Taiwanese.
HTC waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa Rabitaanka EYE Iyada oo leh Kaamiradeeda Sawirka ah ee '13MP Front Selfie Camera'
HTC Desire EYE ayaa lagu soo bandhigay shalay magaalada New York xaflad. Telefoonka iswada ufiican.
Codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear, maanta Stellio Music Player waa muusig aad u fiican oo Smartwatch ah
Stellio Music waa ciyaaryahan muusig aad ugu fiican smartwatch-kaaga ama smartwatch-gaaga ee wata nidaamka hawlgalka ee Android Wear.
Ku rakib mawduuca LG G3 on boosteejooyinka Xperia
Halkan waxaad ku haysaa apk iyo tilmaamo cad oo ku saabsan sida loo rakibo mawduuca LG G3 ee ku jira boosteejooyinka Xperia.
Samsung waxay daabacdaa fiidiyoow muujinaya shaqooyinka badan ee Samsung Galaxy Note 4
Samsung ayaa soo saartay muuqaal muujinaya sida shaqooyin badan ay uga shaqeeyaan Samsung Galaxy Note 4
OnePlus One ayaa lagu cusbooneysiiyay taageerada qaabka RAW, xalka dhibaatada isku dhafan iyo inbadan
OnePlus One wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo keenaya horumarin muhiim ah sida xalka shaashadda taabashada, taageerada qabashada ee qaabka ROW iyo inbadan
Goordhow ayuu imanayaa: Samsung Gear VR oo ah 199 Euros
Taariikhda sii deynta iyo qiimaha Samsung Gear VR waa la sifeeyey, 1-da Diseembar ee Kuuriya iyo 200.000 Wons oo qiyaastii noqon doonta $ 187.
HTC One M8 Eye iyo Qiimaha isha isha ee isha ayaa xaday
HTC waxay soo bandhigaysaa HTC Desire Eye iyo HTC One M8 Eye waxaanan horey u ognahay qiimahooda qiyaas ahaan
Sawirada cusub ee HTC Desire Eye waxay xaqiijinayaan kamaradeeda hore ee 13 megapixel
Sawirro cusub oo ka mid ah HTC Desire Eye ayaa la soo daayay iyagoo xaqiijinaya kamaraddeeda hore ee 13-megapixel
LG waxay kugu siineysaa 50 euro markii aad iibsaneysid LG G3
Haddii aad rabto inaad iibsato LG G3, ka faa'iideyso dallacaadda cusub ee soo saaraha Kuuriya, oo soo celinaysa 50 euro markii aad iibsanayso boosteejada
Shaashadda qufulka ee Samsung Galaxy Note 4 ee ku saabsan Android-kaaga
Haddii aad jeceshahay shaashadda qufulka ee Samsung Galaxy Note 4, hubaal waad jeclaan doontaa codsigan bilaashka ah maaddaama uu yahay barnaamijka sida ugu fiican u ekeysiinaya nidaamka qufulka ee Samsung Galaxy kala duwan.
LG G2: buuxi mawduuca LG G3 ee Roms Cyanogenmod 11 iyo 11S Bilaash!
Halkan waxaad ku leedahay mawduuca ugu fiican LG G3 ee LG G2 oo leh Rom Cyanogenmod 11 ama CM11s.
[APK] Launcher-ka Huawei wuxuu ku socdaa wixii Android 4.0 ah ama ka sareeya
Halkan waxaan toos ugaga tagayaa Launcher-ka Huawei si aad ugu tijaabiso moodooyinka kale ee boosteejooyinka Android.
Sony Xperia Z3X, Godzilla ku xigta ee soo saaraha Japan
Iyadoo loo marayo AnTuTu waxaan awoodnay inaan ku aragno astaamaha farsamo ee suurtagalka ah ee cusub ee Sony Xperia Z3X, titan-xiga ee soo saaraha Japan